N5 Burger Garage. Hihinana hamburger ao amin'ny atrikasa mekanika | Famoronana an-tserasera
Ny fandehanana any amin'ny mekanika dia midika hoe toe-javatra ratsy eo amin'ny fifandraisanao amin'ny fiaranao foana. Iray amin'ireo mampalahelo tsy maintsy lalovantsika tsindraindray izany noho ny fitafian'ny fiara. Ary arakaraky ny maha-antitra azy, no vao mainka tokony handehanantsika any. Rehefa tonga ny fotoana lasa sakaizantsika ny mpitantana, na dia isika aza mikapoka Miaraka amin'ny vidiny ka tsy ahafahantsika manana Hamburger tsotra ao amin'ny Burger am-perinasa.
Toa tontolo feno fahotana tanteraka ny mankafy azy io, na farafaharatsiny izay sary ananantsika. Francisco Segarra dia nanao izany indray. Ilay mpamorona endrika anatiny malaza amin'ny fanapotehana ny drafitra famolavolana anatiny dia nanova ny N5 Burger. Ankehitriny: garazy. Tontolo iainana izay toa garazy hametahana ireo fiara nanomboka tamin'ny fitopololahy, navadika ho fitambarana hamburger.
Ao afovoan'i Valencia Nahita trano fisakafoanana tsy mitombina miaraka amina toerana tsy mampino izahay. Tsy ilay Burger N5 voalohany no hitan'i Francisco Segarra, fa hatramin'izao dia mbola tsy nisy nanao izany tamin'ny fomba mitovy. Samy nomena rivo-piainana hafa ny tsirairay tamin'izy ireo. Toy ilay hita ao amin'ny Castellón afovoany aingam-panahy avy amin'ny roapolo, miaraka amina tontolo elita kokoa araka ny ahitanao azy.
1 Hevitra Francisco Segarra tanteraka
2 Ny taona 70 izao
3 Hanitikitika anao ireto sary manaraka ireto
Hevitra Francisco Segarra tanteraka
Araka ny nolazain'izy ireo, trano fisakafoanana manana ny maha izy azy ary mpisava lalana amin'ny famolavolana anatiny ao Espana. Modely fandraharahana mahagaga izay tsy voamariky ny afovoan'i Valencia. Ary azo antoka fa na aiza na aiza no tsy fantatra. Azo antoka fa maro amintsika izay tsy mipetraka amin'io faritra io no faly amin'ny fananana zavatra toa izao ao amin'ny tanànantsika.
«Francisco Segarra dia namolavola ny foto-keviny tamin'ny famakiana ny kanton'ny famolavolana habaka hatramin'ny fetra farany. Voaravaka hatramin'ny antsipiriany farany, tsy misy tahotra izy ary mamoaka toetra. Ny vokatra dia trano fisakafoanana tokana sy tokana mifanaraka amin'ny menio iray mahasalama.
Raha vantany vao miampita ny tokonam-baravarana isika dia mahatsapa ny tabataban'ireo motera sy ny fofon'ny lasantsy. Manoloana ny paompy taloha, miandry ny anjarantsika izahay. Ilay mpandroso sakafo, miakanjo akanjo ivelany, dia miaraka aminay amin'ny latabatray. Mandalo eo alohan'i Derbie taloha sy Bultaco izay mametraka anay avy hatrany amin'ilay toerana izahay. Tsy misy isalasalana fa ao anaty atrikasa mekanika tena izy isika ... »
Ny taona 70 izao
Avy amin'i Francisco Segarra izy ireo milaza aminay fa ny endrik'ilay trano fisakafoanana dia mifantoka amin'ny Citroën HY izay eo afovoan'ny trano fisakafoanana. Kamiao sakafo nahandro haute tamin'ny kodiarana. Ary antenaina izany, satria izy dia miorina amin'ny 'foiben'ny ivon-toerana', toerana iray izay tsy voamariky ny olona. Ao anatiny, voaomana ny burger gourmet, specialty an'ny firm No. 5, vita amin'ny vokatra isaky ny vanim-potoana tsy misy fandokoana na preservatives.
Ny toe-tsaina sahisahy indrindra an'i Francisco Segarra amin'ny famolavolana trano fisakafoanana tokana. Generator iray manontolo an'ny maodely vaovao eo amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny.
Namela ny lazany tamin'ny atrikasa ilay hetsika tsy miato. Ny rindrina vita amin'ny tile dia mampiseho ny faharatrana sy ny ranomaso nandritra ny taona maro ary ny gorodona vita amin'ny varnished dia manahaka ny tasy amin'ny diloilo sy menaka. Ny vy harafesina dia maka ny fanaka, miaraka amina famaranana efa antitra. Tonga hatrany amin'ny zoron-trano rehetra ny fomba indostrialy.
Ny varavaran'ny biraon'ny tapakila dia manome lalana mankany amin'ny booth kely. Miditra amin'ny maha-akaiky ny atrikasa izahay ary eo ambanin'ny valindrihana fitaratra, firavaka fandresena lehibe. Fanangonana amboara tena izy, fiarovan-doha ary palitao hazakazaka izay mitondra antsika tampoka eo amin'ny toeran'ny tena moto. Anisan'ireo takelaka metaly ireo, miakatra afovoany amin'ireo boaty atrikasa ireo fitaovana. Drill, jiro feno pliers, tariby mihantona amin'ny rindrina ... Hatao hiasa daholo! Na ny cutlery aza, namboarina tamin'ny endrika wrench.
Raha manana hevitra ianao fa mpiorina hamburger haingana, mora ary endasina ity dia tena diso ianao. Sakafo sakafo haute no aroso ao amin'ity trano fisakafoanana ity. Burger hen'omby galisiana, guacamole namboarina niaraka tamina chips tortilla, moulard patto 150 grama amin'ny ronono zanak'ondry misy tongolo, sns. Haitra.
Hanitikitika anao ireto sary manaraka ireto
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » N5 Burger Garage. Mihinana ny hamburger anao ao amin'ny fivarotana mekanika